मधुमेहका रोगीले खान नहुने १० खानाहरु !! | सुदुरपश्चिम खबर
मधुमेहका रोगीले खान नहुने १० खानाहरु !!
रगतमा चिनीको मात्रा आवश्यकभन्दा बढी देखा पर्नुलाई मधुमेह भनिन्छ । मानिसको आफनै खानपान र रहनसहनको कारण यो रोग देखा पर्छ । यो सरुवा रोग होइन । कतिपय मधुमेह वंशानुगत पनि हुन्छ । मधुमेह लागेको शंका लागेमा तुरुन्त स्वास्थ्य संस्थामा जाँच गराई उपचार गराउनुपर्छ । मधुमेहबाट बच्न नियमित व्यायाम, सन्तुलित आहार आदिमा ध्यान दिनुपर्छ ।
खोप लगाएका विदेश जाने नागरिकको प्रमाणीकरण निशुल्क गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुरोध
यी ५ समस्याले गर्नसक्छ हृदयघातको संकेत, यस्ता लक्षणहरुलाई नगर्नुहोस् वेवास्ता !!
दैनिक खानपानमा ध्यान दिनु नै यो रोगलाई नियन्त्रण गर्ने उपाय हो । त्यसैले यसलाई नियन्त्रणमा राख्नमा लागि केही खानेकुरा खानुहुँदैन ।
१. चामलको भात
चामलको भातमा प्रचुर मात्रामा भिटामिन, मिनरल्स र फाइबर पाइन्छ । साथै, यसमा कार्बोहाइड्रेटको मात्रामा पनि अत्यधिक मात्रामा पाइन्छ । जसले शरीरमा चिनीको मात्रा बढाउँछ । त्यसैले मधुमेहका रोगीले ब्राउन राइस खाने गर्नुपर्छ ।
केरामा पोटासियम, भिटामिन बी–६, फाइबर, म्याग्नेसियम जस्ता महत्वपूर्ण पोषक तत्वहरु पाइन्छन् । पाकेको केरामा काँचो केरामा भन्दा १६ गुणा बढी चिनीको मात्रा पाइने भएकाले मधुमेहका रोगीले धेरै केराको सेवन गर्न हुँदैन ।
३. फलफूलको जुस
बजारमा पाइने बट्टाभित्रका जुसमा चिनीको मात्रा धेरै हुने भएकाले यसको सेवन मधुमेहका रोगीका लागि फाइदाजनक हुँदैन । त्यसले मधुमेहका रोगीले फलफूलका ताजा जुस पिउने गर्नुपर्छ ।
कफिले शरीरमा उर्जा बढाउँछ । यसले बोसो पगाल्न र एकाग्रता बढाउन पनि मद्दत गर्छ । यसमा राइबोफ्लेबिन, पोटाशियम जस्ता पदार्थहरु पाइन्छन् । तर, कफिमा दूध, क्रिम र चिनी मिसाएर खाँदा यसले शरीरमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ ।
५. फ्लेवर्ड ओट्स
साधा ओट्स स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ । यसमा फाइबर हुने भएकाले मधुमेह नियन्त्रण हुन्छ । तर, फ्लेवर्ड भएको ओट्सको सेवनले भने मधुमेहका रोगीलाई झनै समस्यामा पार्न सक्छ ।
मधुमेहका रोगीका लागि महलाई चिनीको विकल्पका रुपमा लिइन्छ । तर कहिले काँही चिनीको उच्च मात्रा भएका कारण यो नोक्सानदायक हुनसक्छ ।
७. प्रोटिन बार
व्यायाम गर्नुभन्दा अगाडि प्रोटिन बारको सेवन स्वस्थकर मानिन्छ । यसले शरीरलाई उर्जा प्रदान गर्छ । यसमा क्यालोरी, चिनी, काब्र्स र फ्याटको मात्रा धेरै हुने भएकाले मधुमेहका रोगीका लागि बेफाइदाजनक हुन्छ ।
८. ड्राइड फ्रुट
यसमा किशमिश, बदाम, अन्जीर आदि खानेकुरा मधुमेहका रोगीले कम प्रयोग गर्नुपर्छ ।
यो फ्रुट स्वीटनर र उच्चमात्रामा फ्याट भएको दूधबाट तयार गरिन्छ । यसमा काब्र्स र चिनीको मात्रा धेरै हुन्छ । त्यसैले यो स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुँदैन ।
स्मुदीमा फाइबर र प्रोटिन दुवैको मात्रा अत्यधिक धेरै हुने भएकाले मधुमेहका रोगीले यसको सेवन नगर्दा नै उत्तम मानिन्छ । (रातोपाटी बाट सभार)
अकस्मात धन लाभ हुनु अघि देखिन्छन् यस्ता सङ्केतहरु, कतै तपाईले पनि देख्नुभएको छ की ?
कसरी हामी बुढो हुन्छौं ?
साताको पहिलो दिन यस्तो छ तपाईँको राशिफल !
थरीथरीका नुनहरु, कुन बढी उपयोगी ?
दैनिक मनतातो दुध पिउँदा जरैदेखि नष्ट हुन्छन् यी रोगहरु, महिलाका लागि अमृत समान !!
गोरखा जिल्लामा ‘तपाईंको मास्क खै’ अभियान
तुइन प्रकरणबारे भारतसँग गम्भीर आपत्ति जनाउन सरकारलाई माओवादी केन्द्रको आग्रह
कञ्चनपुर जिल्लामा जारी निषेधाज्ञा साउन मसान्त सम्म लम्बियो